Macluumaad dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan waxey ku jiraa bogga InfoFinlandi Shahaado shaqo .
Macluumaad dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan waxey ku jiraa bogga InfoFinlandi Shahaadooyinka ajnabiga markii la keeno Finland .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOpetushallitus
Aqoonsiga shahaadadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Sidan ayaad u sameynaysaa codsiga shaqada iyo liiska taariikh aqooneedka iyo shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Europassi-CV waa CV guud oo Yurubiyaan ah, yacni qof ka waran. Adeegga Europassi ee elegtroonigga ah ayaad ku ururin kartaa islamarkaasna ku keydin kartaa qof ka warankaaada (CV). Waxaa kale oo aad adeegga ku ururin kartaa boortifooliyo elegtroonig ah oo ka hadlaysa aqoontaada. Adeegga Europassi waxaa laga helaa macluumaad ku saabsan fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee Yurub oo dhan. Adeeggu waa lacag la’aan waxaana loogu talaggalay dadka oo dhan.
Europassi waxaa laga isticmaalaa dhammaan wadamada EU/ETA. Waxaad Europasso u isticmaali kartaa raadinta shaqada iyo waxbarashada. Europassi wuxuu faa’iido gaar ah kuu leeyahay, marka aad Finland ka raadinayso shaqo ama waxbarasho adigoo ka imaanaya waddan kale oo Midowga Yurub ah.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEuropass.eu
Macluumaadka taariikhda shaqo iyo aqooneedLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Tilmaamyada wareysiga shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Markasta samee heshis shaqo oo qoraal ah ka hor inta aadan billaabin shaqada cusub. Kala heshii shaqo-bixiyaha waxyaabaha ku qoran heshiiska shaqada. Si taxaddar leh u aqri heshiiska ka hor inta aadan saxiixin. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shuruudaha xiriirka shaqada iyo mushaarka Finland .
Marka aad billaabeyso shaqo cusub, u gee shaqo-bixiyaha kaarka canshuurta. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Kaadhka cashuurta .